"Destiny 2" waxay heli doontaa kaarar dagaal, maxaa yeelay ciyaar walba hadda waa "Fortnite" - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » madadaalo "Destiny 2" waxay heli doontaa kaarar dagaal maxaa yeelay ciyaar walba hadda waa "Fortnite" - BGR
"Destiny 2" waxay heli doontaa kaarar dagaal maxaa yeelay ciyaar walba hadda waa "Fortnite" - BGR
Isbadalo badan ayaa la filayaa aayahooda 2 usbuucyada soo socda, laga bilaabo bilaabida kordhinta laga bilaabo Shadowkeep ilaa bilowgiisii ​​gudaha of Destiny 2: Iftiin Cusub . , kaas oo hoos u dhigi doona qiimaha ciyaarta salka si loo xoreeyo. Laakiin Bungie ayaa sidoo kale beddeleysa nidaamka horusocodka ciyaarta, iyadoo la siinayo ciyaartoy leh goolal la taaban karo oo ay ku gaaraan xilli ciyaareedka cusub oo dhan, iyagoo aan ku tiirsaneyn boobka ay ku yimaadaan si lama filaan ah howlgalka ka dib.
Mid ka mid ah dariiqooyinka ay Bungie ku guuleysan doonto tan. waa adigoo ku daraya qaab pass Qaab dhismeedka Fortnite (loo yaqaan pass xilli xilli ah aayahooda 2 ), taas oo u oggolaaneysa ciyaartoygu inay ku guuleystaan ​​illaa iyo heerka 100 inta lagu jiro xilliga, mid walbana abaalmarintiisa u gaar ah. Waxaa jira waddo bilaash ah iyo jid qaddar xilliyeed kasta, oo haddii aad rabto inaad gasho qadka lacagta caymiska waxaad bixin doontaa 10 $. Lacagtaas 10 waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad ku ciyaarto dhammaan waxyaabaha xilli xilli dheeri ah ee Bungie ay u keento ciyaarta.
Waa isbedel weyn marka loo eego horumarka ka jira aayahooda 2 maxaa yeelay waa sida ugu wanaagsan ee loogu guuleysto dunida ugu sarreysa. Kahor marin xilliyeedka, hubka xariiqda iyo hubka ayaa garaacaya waxa ku jira ciyaarta dhamaadka oo ay si isdaba joog ah kula dagaallamayaan Crucible iyagoo rajeynaya dhicitaan weyn, ama dhameystirka waxa inta badan silsilad. su’aalo aad u dheer oo xiiso badan oo walxaha gaarka ah leh.
Ciyaartu meel kasta uma socdaan, laakiin ciyaartoydu hadda waxay heli doonaan abaalmarino joogto ah maaddaama ay ciyaarayaan marka lagu daro halyeeyga bambo gacmeedka ama koofiyadda qalaad ee ay xilligaas raadinayeen. Sida uu Luke Smith sharraxayo ka yimid Bungie oo kujira qoraal mareeg ah khamiista "Waxaad horumar ku sameyn doontaa adoo ku guuleysanaya XP adiga oo sameeya wixii aad ku soo gashay aayaha - Dilo daanyeerrada iyo dhammaystirka gunnada hawlqabadka. "
Xilliga kuwa nool nool, kuwaas oo lagu bilaabi doono is garab socda Ujeeddada 2: Shadow daryeel (waana lagu dari doonaa iibsi kasta oo la iibsado) wuxuu socon doonaa usbuucyada 10, iyo Smith waxay sheegaysaa in usbuucyadii ugu dambeeyay ee 2-4 ee xilli ciyaareedka, Bungie ay u oggolaan doonto ciyaartoydu inay bixiyaan lacagaha safka xilliyeed ee laga yaabo inay seegeen. In kasta oo ciyaartooyda qaar ay ka gudbi doonaan darajooyinka 100 bil gudaheed, kuwa kale ma heli doonaan waqti badan oo ay ku qaataan aayahooda 2 iyo Bungie waxay rabaan inay hubiyaan inay haystaan ​​ugu yaraan fursad ay ku helaan dhammaan abaalmarinta xilliyeed.
Xarka hoostiisa, isbeddelada xilliyada iyo horumarka gudaha aayahooda 2 run ahaantii maahan wax la yaab leh, laakiin dusha sare, waxaa jira isbedelo ku filan oo laga dhigo in ciyaartoyda qaar laga dhigo wax yar oo aan raaxo laheyn. Si kasta oo ay tahay waxa microtransaction dhab ahaan ku lug leh, ama sida ay u fududahay inay iska indha tiraan, ciyaartoy badan si fudud uma hor istaagi karaan jiritaankooda, waxayna ku daraan waxyaabo badan oo lacag la’aan ah (ciyaar u madax bannaan inay u ciyaaraan, jidka agtiisa ), wuxuu sixi doonaa qaar ka mid ah ciyaartoyga qaab qaldan. Laakiin tani waa jihada ay Bungie dooratay waxayna noqon doontaa wax xiiso leh inaad aragto jawaabta.
Source Image: Bungie
10 inta badan waxaa lagu muujiyaa horudhaca TV-ga iyo Netflix bisha Sebtembar - BGR
Star Wars, El Camino, Joker iyo inbadan - BGR